Okushiwo amaphupho lapho wena noma wena ubanga esihlathini: ukuhumusha okuyinhloko, nokunye ukuhumusha kuye ngokuthi ubuntu bendzaba.
Yini ongayilindela uma ubangazela esihlathini?
Ukuchazwa kwephupho lapho uwanga khona esihlathini.
Ngokuvamile uphupha ukuhumusha iphupho ngokumanga, njengophawu lokuthi umuntu uzolinda ukunakekelwa okukhulu kobulili obuhlukile futhi empeleni. Kodwa njengoba kunehluke, khona-ke incazelo ezincwadini zephupho inkulu kakhulu kangangokuthi ayihlali isikhathi eside futhi ididekile. Namuhla sanquma ukuhlala ngenye yezinhlobo ezingenacala kakhulu zokubonakaliswa kwesisa - ukubanga esihlathini.
Kungani ungaphupha kanje?
Yile ndaba ephathwa ngokunemba futhi ngokuphambene nalokho. Uma empilweni yangempela ukumanga esihlathini akuvezi imizwelo ecacile futhi akudingeki ukuba uthwale umthwalo wemfanelo yomuntu, bese incwadi yephupho ichaza incazelo yephupho elinjalo ngokuphambene nalokho. Eqinisweni, uzizwa ubophekile kulowo owakuanga ephusheni ngakho-ke imicabango yakho njengamanje imatasa nendlela yokubonisa ukubonga kwakho.
Uma ubanga isifuba sakho, khona-ke ibhuku lephupho lithi uzama ukuveza isimo sakho somusa nesihawu ngomuntu othile. Kungenzeka ukuthi maduzane uzoba nethuba elinjalo, ngoba uzochitha isikhathi esiningi nalomuntu.
Uma isinyathelo esinjalo ephusheni livela intombazane eyamanga othandekayo wakhe, khona-ke ukuchazwa kwamaphupho kusho ukuthi udinga ukuqinisa ubuhlobo futhi isinyathelo sakhe sizovuzwa.
Okubaluleke kakhulu umuntu owakunanga ephusheni. yilobu buntu obungasiza ekuqaliseni okuningi ngezenzakalo zekusasa.
Uma umngane engakunanga esihlathini, khona-ke kukhona okungavamile kakhulu phakathi kwakho, futhi lokhu umehluko kukuvimbela ekukhulumeni ngokukhululekile. Kunesinye, ngisho nokuchazwa okuncane kokulala kokulala. Ngokusho kwakhe lo mphupho uzolinda ukuhlukana kumngane wakhe, nangenxa yokuxabana okukhulu.
Ukubamba esihlathini lentombazane kuhunyushwa ngokuqondile ngokuvela kwentombazane. Uma engeke akhangele ngaphandle, khona-ke lo mphupho kufanele alungiselele isikhathi esihle sokuphila. Kodwa ukumanga owesifazane omuhle esihlathini akuyona isibonakaliso esihle kakhulu. Inkosikazi enjalo ingaletha izinkinga eziningi nokuzikhandla okukhulu, okuzobukeka kabi ngedumela lomphuphi.
Ukuchazwa kwephupho owake wamanga ngalo umfundi ofundela ithunzi ukuthi ubunzima bakho buzosiza ukuxazulula abangane abadala.
I-Dream Ukuhumusha: ukumanga oshonile esihlathini
Nakuba umbono onjalo ungabangela ukuphikisana kakhulu, futhi hhayi njalo, imizwa, kusadingeka ukuqonda incazelo yawo.
Uma umuntu oshonile ewakanga, kufanele uqaphele impilo yakho. Mhlawumbe lesi sifo asizizwanga, kodwa kungcono ukubonana nodokotela ukuvimbela ukuthuthukiswa okusebenzayo kwesifo nokugwema ukwelashwa okuqhubekayo.
Uma uphupha ukuthi wena ngokwakho uke wamanga oshonile ephusheni, khona-ke empilweni yangempela ulindelwe isikhathi esimatasa kakhulu. Awukwazi ukubizwa ngokuthi uphumelele noma awuphumelelanga. Kuyoba khona ups and downs phambili, okuyoletha imizwelo enjabulo futhi edabukisayo.
Enye incazelo yokumanga komuntu oshonile ithi umphuphi angase ahlele ibhizinisi elithembekile. Isibonelo, uguqule owakhethiweyo noma ngengozi ukuzinikela.
Kodwa kusukela endaweni yokucabanga kwengqondo ekhanda ephusheni lomuntu oshonile ufakazela ukuthi lo mphupho usinde ngokulahlekelwa yile muntu futhi usalindele.
Njengoba ubona, ukubonisa okungekho emthethweni kwemizwa ngendlela yokubamba ukukhanya ehlathini kungaba nencazelo eningi, uma ubona ngesikhathi sokuphumula ebusuku. Ngakho-ke, zama ukukhumbula yonke imininingwane yobuthongo futhi ungaphuthelwa ngisho nemininingwane encane kakhulu.
Iyini iphupho? Ukuhunyushwa kwezincwadi zamaphupho adumile
Lithini leli bhere?
U-Natalia Friske uphendule kabi abagxeka ku-Instagram
Uma umyeni ethi akaqiniseki ngobuhlobo
Kungcono kakhulu ukuxazulula impikiswano yomndeni
Yikuphi ukudla okulungile kwabesifazane abakhulelwe?
IPharadesi labathengi: izinto zokuthenga ezitolo e-Italy
Ikhalenda lokukhulelwa: amasonto angu-12
Imisebenzi yemidlalo: into esemqoka ukuqala ngokulungile
Indlela yokugeza abantwana bekhala?
Ukwelashwa kwekhanda ngaphandle kwezidakamizwa